by Olle Ling
တရုတ်စာလုံးများကိုရေးသားဖို့သင်ယူခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံး app ကို
အများအပြားပတ်သတ်ပြီးခုနှစ်တွင်တရုတ်သင်ယူခြင်းကိုအခြားဘာသာစကားသင်ယူခြင်းနဲ့တူတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတချို့ apps များထိုကဲ့သို့သော Anki သို့မဟုတ် LinqApp တူသောဇာတိစပီကာနှင့်အဆက်အသွယ်၌သငျထားသောသူတို့နှင့်တူယေဘုယျစာလုံးကတ် apps များအဖြစ်, တရုတ်အပါအဝင်ဘာသာစကားများ, သင်ယူဘို့တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအသုံးဝင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
တရုတ်အခြားဘာသာစကားများနဲ့တူ 100% မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘာသာစကားသင်ယူသူပစ်မှတ်ထားကြောင်းမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကိုသို့မဟုတ် app ကိုမလွှဲမရှောင်, အခြို့သောအရာတို့ကိုလက်လွတ်ပါလိမ့်မယ်။
တရုတ်စာလုံးများကိုအများဆုံးကိုအခြားအရေးအသားစနစ်များအနေဖြင့်အခြေခံကျကျကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြပြီးလိုအပ် ထူးခြားတဲ့ချဉ်းကပ်မှု အထူးသဇာတ်ကောင်သင်ယူဘို့ဒီဇိုင်းနှင့်ကိရိယာများ။
Skritter အများဆုံးကိုအခြားစာလုံးကတ်အစီအစဉ်များ (ကဲ့သို့တူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းကို iOS, Android နှင့် web browsers တွေအဘို့အ app တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် လှပတဲ့အထပ်ထပ် လက်ရေး: တအရေးကြီးသောခြွင်းချက်နှင့်အတူဥပမာ,) ။ သင်သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာများအတွက်အရေးအသားတက်ဘလက်ကို အသုံးပြု. အပေါ်ဇာတ်ကောင်ရေးသားဖို့ခွင့်ပြု apps များရှိပါသည်နေစဉ်, Skritter သင်သည်မှန်ကန်သောတုံ့ပြန်ချက်ပေးသည်သောတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအမှားတစ်ခုခုလုပ်နေလုပ်နေနှင့်သင်မယ့်အစားပွုပါပွီသင့်တယ်ဘယ်အရာကိုအခါသငျသညျပြောပြသည်။
Skritter နှင့်အတူအရေးအပါဆုံးအားသာချက် screen ပေါ်မှာရေးသားခြင်းများစွာကိုအခြားရွေးချယ်စရာထက်အမှန်တကယ်လက်ရေးဖို့အများကြီးပိုနီးစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, လက်ဖြင့်ရေးသားဖို့သင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်စုံတစ်ဦးကို manually လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်သင့်ရဲ့လက်ရေးစစ်ဆေးရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, သို့သော်ဤလက်တွေ့သည်နှင့်သင်ထိုသို့ပြုမှတစ်စုံတစ်ဦးကိုငှားရမ်းလျှင်စျေးကြီးပါလိမ့်မယ်။
Skritter သင်တို့အဘို့လေဖြတ်အလို့ငှာခြေရာခံစောင့်ရှောက်, ဒါရုံ app ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်အလျင်အမြန်ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ဇာတ်ကောင်အစိတ်အပိုင်းများမှန်ကန်သောလေဖြတ်အလို့ငှာလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်
ဇာတ်ကောင်များနှင့်စကားလုံးများကိုမှတ်မိဖို့ mnemonics ကိုသုံးပါ - ရှိပါတယ်အများအပြား mnemonics ပါဝင်သည် (အခြားအသုံးပြုသူများကအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး) နှင့်သင်သည်လည်းသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးခြင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာရှိ
သင့်ဖုန်း မှလွဲ. ဘာမျှမလိုအပ်ကတည်းကဒါဟာလက်တွေ့ကျတဲ့င်
Skritter လည်းသင့်ရဲ့တန်ချိန်, အဓိပ္ပာယ်နှင့် Pinyin စမ်းသပ်
သငျသညျ Skritter ယေဘုယျအားဖြင့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြသရာ, ဒီမှာက iOS app ကိုများအတွက်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကနောက်တွဲယာဉ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဝဘ်ဘရောက်ဇာနဲ့ Android app များကိုအတိအကျတူညီသည်ကြည့်ရှု, ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အကြဘူး, သူတို့ကအတူတူပင်လမ်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။ Skritter နှင့်အတူသင်ယူသင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်တိုးမြှင်: သင် Skritter အကြောင်းပိုမိုသိလိုလျှင်, သင်ဒီမှာကြာကြာပြန်လည်သုံးသပ်ထွက်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
သငျသညျပြီးသား Skritter သုံးပြီးစတင်ဖွင့်လျှင်, သင်တို့ကိုငါ app ကိုထဲကပိုပြီးရရန် settings ကိုအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲလုပ်အကြံပြု:
လေ့လာမှု options များအတွက်လေဖြတ်ခြင်းအလို့ငှာတင်းကျပ်တိုးမြှင့် - ဤမှန်ကန်သောလေဖြတ်အလို့ငှာပြဋ္ဌာန်းနှငျ့သငျညာဘက်အဖြေပေးတော်မူပါတယ်မဟုတ်လျှင်သင်သည်သုံးသပ်ဆက်လက်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ကုန်ကြမ်း squigs ကိုဖွင့်မည် - ဤအစစ်အမှန်လက်ရေးဖို့အများကြီးပိုနီးစပ်သည်နှင့်သင်အမှန်တကယ်မေ့လျော့ကြပြီသောအရာတို့ကိုသိသောယုံကြည်သူသို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်အရူးပါဘူး။
လေ့လာမှုမှန်မှန် - မိုဘိုင်းသင်ယူမှုနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအရာကဘယ်နေရာမှာမဆိုမည်သည့်အချိန်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ တစ်ဒါဇင်ဇာတ်ကောင်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့သင့်အချိန်ဇယားထဲမှာသေးငယ်တဲ့ကွာဟချက်ကိုသုံးပါ။
အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့စပိန် '' အီးမေးလ်များ '' ဟုပြောသလား?
ပြင်သစ်တွင်အီစတာ ( 'Pâques')
အဆိုပါဖော်ပြမှု '' Honi Soit Qui တှကေအသငျ့ Y ကိုခြံ '' ၏ဇစ်မြစ်
အဆိုပါစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်လမ်းနှင့်ပြင်သစ်တွင် 'ပထမနို' '၏ Lyrics
နံနက်ငါအရမ်းဟောငျးစပိန် Learn နည်း
S ကို, စက္ကန့သို့မဟုတ် SS အသုံးပြုနည်းလိုက်တဲ့အခါ
Negritude ၏သမိုင်း: အဆိုပါ Francophone စာပေလပ်ြရြားမြ
Gurmukhi နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ထိပ်တန်း Nitnem Prayerbooks
Dyslexia နှင့် Dysgraphia
ကြောင်ရဲ့မျက်လုံးလမ်းလုံး - ပါစီကို Shaw
အကဲဖြတ်ခြင်းအဘို့အထိရောက်သောကိုက်ညီမှုမေးခွန်းများ Create မှသိကောင်းစရာများ
အဆိုပါတစ်ထောင်နေ့ရက်များ '' စစ်ပွဲ
တရုတ်ထဲမှာ "မင်္ဂလာပါ" လို့ပြောပါဖို့ကိုဘယ်လို
တစ်ဦးနှင်းလျောစီး Fakie (Switch) စီးကိုဘယ်လို
ထိပ်တန်း 10 One Direction အဖွဲ့သီချင်းများ
အခင်းအကျင်းပန်းချီများအတွက်ထိပ်တန်း7သိကောင်းစရာများ
Banisters နှင့်ပို - ထိုရထားလမ်းကြားဗိသုကာပညာ